Resaky ny mpitsimpona akotry : fivezivezen’ny fanahy | NewsMada
Diso marina loatra ilay fitenenana hoe rehefa noana ny kibo mivezivezy ny fanahy, mainka moa raha momba ny ankizy mpianatra. Ahoana tokoa moa no isokafan’ny sainy raha manitikitika ny ao anaty ambavafo? Diso marina koa fa maro ny ankizy eto amin’ny nosy no mandeha any an-tsekoly tsy nitelin-kanina noho ny tsy fahampiana any an-tranony. Zava-dehibe ny fandraisana adidy natao ho fanarenana izany amin’ny alalan’ny kantinina fanohanana ara-tsakafo ho an’ny mpianatra. Any an-tsekoly dia tsy vitan’ny katro-doha fotsiny fa ilaina koa ny fandraisana an-tsoratra ny fampianarana ary maro ireo taranja mitaky fanoratana sy famakiana, mazàna maro no tsy ampy fitaovana ho an’izany noho ny fahasahiranana, dingana lehibe vita ny famatsiana amin’ny alalan’ny fizarana “kit scolaire”. Tsy hita hoamaivanina ny ezaka novokarin’ny fanjakana teo amin’ny fanatanterahana izany.
Na eo aza anefa izany rehetra izany dia mbola mikasika kojakoja fotsiny izany fa tsy eo ny tena vontoatin’ny fampianarana: fampitana fahaizana sy fanokafana saina ary fanazarana fampiasana izany no adidin’ny sekoly. Olona nanoman-tena niofana taona maromaro no afaka anankinana izany adidy izanys. Tsy afaka ho lazaina anefa fa tena nahomby ny fampianarana any an-tsekolim-panjakana eo amin’ny ambaratonga fototra, nisy fihemorana izay tsy azo hodian-tsy hita. Azo antenaina ve fa ny fampitomboana ny isan’ny mpampianatra dia ampy ho fanarenana izany lesoka izany raha latsa-danja noho ny tany aloha ny fampiofanana omena ireo mpampianatra vao?
Tarehimarika fotsiny no imasoana, hanenjika taha ambony mikasika ny ankizy an-tsekoly no mahasodoka ahafahana mandoka tena eto amin’ny firaisamonina sy angatahana fanampiana any ivelany? Pao-droa nefa poakaty raha izany tanjona izany no jinery. Ny fianarana anie dia natao hampitombo fahaizana sy ampihiratra ny saina, tsy vitavita foana izany, nefa avy amin’izany ny hery antoky ny fandrosoana. Hisy fandrosoana inona moa raha toa tsy eo ny fisondrotan’ny olom-pirenena ara-batana, ara-tsaina sy ara-panahy? Tsy mbola mahavita azy ny sekolim-panjakana raha mbola tazana fa andosiran’izay afaka mandositra rehetra. Satrin’iza moa no handoa vola isam-bolana any amin’ny sekoly tsy miankina raha mitovy ihany ny vazo tsy mila iampitana rano. Rehefa afaka hilokaloka amin’ny fifaninanana ny sekolim-panjakana dia tratra ny tanjona eo amin’ny maha tohatra fisondrotana azy mampitovy fahafahana sy fahefana ny olona samihafa vintana.